Sida loo Beddelaan MP4 in QuickTime MOV?
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MP4 in QuickTime MOV (Yosemite ka mid ah)?
Mararka qaarkood ma waxaad ka ciyaari kartaa MP4 on QuickTime, iPhone, iPad iyo, iwm Si kastaba ha ahaatee, MP4 ayaa si rasmi ah u aqbalay sida Apple ah oo ay taageerayaan qaab. Taasi waa badan tahay sababtoo ah waxaa ka mid ah MP4 video codecs kala duwan, sida MPEG-4 iyo H.264 iwm oo aan dhammaan codecs video in MP4 la aqbali karin by waxyaabaha Apple. Xaaladdan oo kale ah, qodobkan ku siin doonaa qalab diinta video ah si loogu badalo MP4 in MOV Apple qaab taageeray.
Qeybta 1: Best MP4 in Converter MOV
Qeybta 2: MP4 Free in Converter MOV
Qeybta 3: MP4 Online in Converter MOV
Qeybta 4: MP4 Aqoonta Sharing
Qeybta 1: Best MP4 in Converter MOV for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Taageerada 150+ qaabab video, oo dhan video caadiga ah iyo tan iyo qaabab 3D & HD ka mid ahaa.
• Beddelaan MP4 in Android iyo telefoonada Apple, iPad, iMovie, Final Cut Pro la presets filaayo.
• Gubashada kasta video inay DVD habsami leh arrimo menu kala duwan, sida aroos, dhalashadiisa, fasaxa, iwm
• Qabtaan ee 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta iyo tayada video sare wax soo saarka.
Sida loo badalo MP4 in MOV
Fadlan akhri dhex tutorial hoose ee ku saabsan sida loo badalo MP4 in MOV on Windows (Windows 10 ka mid ah). Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka isticmaala Mac, riix halkan si aad u barato sida loo badalo MP4 in MOV on Mac (Yosemite ka mid ah).
1. MP4 Import files si MP4 si QuickTime MOV Converter
Ku rakib oo ay maamulaan this smart app. Markaas waxaad saddex siyaabood in ay dajiyaan files MP4. Si toos ah jiidi mid ama ka badan MP4 files si app ama u tag "Beddelaan"> "Add Files".
2. Dooro MOV H.264 sida qaab wax soo saarka
Dhab ahaantii, QuickTime MOV, sida MP4, ayaa kala duwan video codecs oo kaliya labo ka mid ah waxaa laga garan karaa Apple soo saarka, H.264 iyo MPEG-4. Nasiib wanaag, app ku siin karaa doorasho MOV H.264. Sidaas halkan, aad leedahay si ay u dejiyaan H.264 sida codec video ah marka aad dooranayso MOV.
In "qaab"> "Video" category liiska qaab hoos-hoos, MOV xusho. Markaasay aad u baahan tahay si ay u doortaan H.264 ee "Settings" doorasho. Ama waxaad click karo si fudud "Device" tab si aad u dooratid qalabka Apple sida qaab wax soo saarka.
3. Ku bilow si loogu badalo MP4 in QuickTime MOV
Hadda, waxaad u baahan tahay in la garaaco "Beddelaan" si loogu badalo MP4 in QuickTime MOV. Markii diinta la sameeyo, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah files MOV H.264-encoded. Wakhtigan, aad jiidi karaan wax soo saarka MOV, kuwaas oo files si Lugood maaraynta 100% si guul leh. Ama xitaa sii wadaan in ay u hagaagsan files qalabka Apple sida iPhone, iPad, iPod taabashada iwm
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo MP4 in ay MOV Converter for Windows (Windows 10 ka mid ah)
# 1. Free Video Converter: Wondershare MP4 Free in Converter MOV
Waxaad isticmaali kartaa MP4 bilaash ah si ay u MOV Converter si loogu badalo MP4 in MOV, xaalkaa videos download iyo YouTube videos.
Pro: Tani waa aalad diinta video gebi ahaanba bilaash ah.
1. No presets dhisay-in diinta si toos ah qalabka la qaadi karo.
2. Waxa kaliya ee aad ku yeelan kartaa 10 beddelaad ee 30X xawaaraha si dhakhso ah, halka Video Converter Ultimate ayaa xadeynta lahayn.
Qeybta 4: Aqoonta la wadaago MP4
MP4 waa kordhinta file caalamiga ah ee qaabka weelka rasmi ah lagu qeexay MPEG-4 ee caadiga ah. Waxaa ogolaan kartaa in aad isu geeyo kala duwan multimedia durdurraa ka galay mid ka mid file hal, sida video, audio, iyo sawirka iwm In la abuuro files MP4 habboon in aad isticmaasho audio iyo video, xitaa qaabab sawir daboolay ay MPEG-4 ee caadiga ah:
1. MP4 video qaabab: MPEG 4-SP / ASP, MPEG-4 AVC / H.264, MPEG-2, MPEG-1
2. MP4 qaabab audio: Advanced Audio sireed (AAC) iyo AC3, MP3, MP2, MP1, CELP, TwinVQ (bitrates aad u yar), SAOL (midi), ALS (sameecadda ah)
3. MP4 Cinwaan text qaab /: MPEG-4 lagu tiriyaa Text (eeg su'aasha 7)
4. MP4 qaabab sawir: jpeg, PNG
Raadinta MP4 sare si Converter MOV? Isku day Video Converter Ultimate hoose si aad ku raaxaystaan ​​waayo-aragnimo diinta video ugu fiican.